Mataanihii madaxa loo kala fujiyay oo afar maalmood ka dib “indhaha kala qaaday” – hareerley News
Mataanihii madaxa loo kala fujiyay oo afar maalmood ka dib “indhaha kala qaaday”
Mid ka mid ah labadii wiil ee qalliinka lagu kala fujiyay iyagoo madaxa iskaga dhagan ayaa indhaha kala furay afar maalmood ka dib markii lagu sameeyay qalliinka taariikhiga ah, sida uu dhakhtar sheegay.
Jaga oo labo jir ah ayaa sidoo kale bishimaha dhaqaajiyay, wuxuuse u baahan yahay in maalin kaste kalyaha loo sifeeyo, maadaama oo uu kalyaha ka jiran yahay.
Walaalkii Kalia ayaa isagu wali miyir daboolan.
Wiilasha ayaa dhashay iyaga oo xididdadooda dhiigga iyo dahaarka maskaxdoodu isku dhagantahay, laakiin qalliin 16saac qaatay ayaa lagu kala fujiyay.
Soddon dakhtar ayaa ka qaybqaatay qalliinkan, waana midkii koobaad ee noociisa ah ee dalka Hindiya lagu fuliyo, waxaa qalliinka lagu sameeyay isbitaal ay dawladdu leedahay oo magaalada Delhi ku yaalla.
Labada wiilba xaaladdoodu way dagan tahay, waana lagu qanacsan yahay sida ay u soo hagaagayso, sida uu BBC-da u sheegay bare sare Deepak Gupta oo ka mid ah dadka ku lugta leh qalliinkan.
Mataanahan ayaa ka soo jeeda tuulo ku taalla gobolka Orissa ee dalka Hindiya, xaaladdan ay ku dhasheen ee madaxa ay iskaga dhaganyihiinna waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa craniopagus.
Qalliinka ka hor waxay ka soo gudbeen marxalad adag, sababtoo ah saddexdii milyan ee ruux ee dhashaba hal ilmo ayaa xaaladdan lagu arkaa, 50% carruurta sidaas ku dhalatana waxay ku dhintaan 24 saac gudahood, sida ay dhakhaatirtu sheegeen.
Qalliinka koobaad waxaa la sameeyay 28kii Agoosto markaas oo dhakhaatiirtu ay sameeyeen xiddido u kala qaybiya dhiigii wadnaha ku soo laabanayay marka uu maskaxda gaaro ee ay halka xidid ka wada qaadanayeen.
Khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujisay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yarayn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la’aanta ama jimicsiga ku yar dadka ku nool caalamka. War bixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu qiyaasay in afar meelood hal meel oo ka mid ah dadka dunida […]
(Daawo):-Haabiil Cabdi Haybe iyo Faaqidaada Ismarinwaaga ka taagan Quba & Education
(Daawo):-Haabiil Cabdi Haybe iyo Faaqidaada Ismarinwaaga ka taagan Quba Masjid & Education halkaan hoose ka Daawo
(Daawo):-Buuqa ka taagan Masjidka Quba Ee London UK Halkaan hoose ka Daawo
Wasiirka Isboortiga XFS marwo Khadiijo Diiriye Oo Balanqaad u Sameysey Gudoomiyaha Magaalada Marka
(Daawo):-Wafdi uu Hogaaminaayo wasiirka Wasaarada Dekadaha ,Gaadiidka iyo Bada Ee K/Galbeed Oo Gaarey Magaalada Marka.